Army puts backers off multibillion-dollar Zimbabwe platinum mine - Worldnews.com
The mine is held in a joint venture between Zimbabwe's Defence Industry, a Russian investor and others. ...
Power imports are cushioning platinum mining companies against Zimbabwe's worst blackouts in three years, but gold mines could face production cuts as they continue to rely...
Anglo American opens Zimbabwe\_'s first platinum smelter
Mining giant Anglo American has opened a $62-million platinum smelter in Zimbabwe, the country's first such refinery, as President Emmerson Mnangagwa vowed to boost the country's valuable platinum sector. ......
Zimbabwe: Villagers Resist Chinese Company’s Mining Project.
By Columbus Mavhunga….. Zimbabwe has clamored for outside investment in recent years, but villagers north of the capital are resisting a Chinese mining project they say will spoil the environment and fail to bring them much benefit. The villagers are from Domboshava, a rocky area north of Zimbabwe’s capital, and they are disputing a Chinese […] ......